Saafi Films - News: Khilaafka Qoysaska Danyarta oo Guryo badan Albaabada u garaacey, Maxaa keenay?
Khilaafka Qoysaska Danyarta oo Guryo badan Albaabada u garaacey, Maxaa keenay?
Qoysaska badan oo ku dhaqan magaalada ayaa lagu soo waramayaa in Khilaafka ka dhex dhasha mudooyinkan uu aad u sii kordhayo, iyadoo siyaabooyin ka duwan looga hadlayo arrimahani.
Daraasad la sameeyay dhowaan ayaa lagu ogaadey in khilaafyada ka dhex dhaca qoysaska uu ka badan yihiin heerkii uu gaarsiisnaa shan sano ka hor, taasi oo dadka qaarkiis ay sheegayaan in ay keentay in qoysas badan ay bur buraan.
Qoysaska ayaa lagu soo waramayaa in khilaafkooda uu ku dhisan qaarkood arrimo la xiriira dhaqaale iyo habkii loo maamuli lahaa.
Waxaa la soo sheegayaa in Lamaanaha qoyska ay isku afgaran waayaan lacago mudooyinkan dambe hay'adaha gargaarka qaarkood ay bilaabeen in qoysaska ay ku taageraan, taasi oo si Kaash ah ay u qaataan, ayna keento in qoysaska ay arrintaasi ku fahmi waayaan.
Xafiiska Wararka ee Saafi Films Muqdisho-Soomaaliya
samira on October 25 2012 ·
4,527,538 unique visits